टमाटर को उचित ध्यान - आफ्नो सफल खेती गर्न प्रमुख
यो लामो मानव शरीर जीवनमा तरकारी धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुनै गोप्य छ। अधिकांश मानिसहरू को आहार मा उपस्थित धेरै भिटामिन, खनिज र जैविक एसिड को एक fount रूपमा। तिनीहरूलाई बिना, यो मानव शरीर को व्यावहारिक असम्भव सामान्य विकास र कामकाज छ। उपयोगी तरकारी को सूची अन्तिम स्थानमा टमाटर कब्जा छ छ। विभिन्न स्वादिष्ट खाना तयार र ताजा खपत गर्न प्रयोगको।
थप र मान्छे किनभने टमाटर हेरविचार को, विला र तरकारी, टमाटर सहित बढ्न भूमि को जमीन जायदाद प्राप्त आफ्नै हातले पनि गाह्रो छैन। पहिले नै निर्धक्क भई, यो व्यवसाय मा अनुभव गर्नेहरूलाई भन्न टमाटर को खेती मात्र एक धनी बाली, तर पनि सकारात्मक भावना धेरै ल्याउँछ। तर यो खेती अभ्यासहरू सबै नियम मात्र सम्भव विषय हो। यो टमाटर, उचित लागि बेड तयार, बीउ को चयन बुझाउँछ बिरुवा को रोपण टमाटर र हेरविचार को। सुरुमा, तपाईं भूमि को एउटा सानो टुक्रा रोपण टमाटर लागि, यो उद्देश्य लागि यो खन्नुहोस् गर्न खाद, चिल्लो, साथै समय समयमा तान्नु सामा आवश्यक छ किनभने लाग्न सक्छ। यो कठिनाइको धेरै ल्याउनेछ टमाटर हेरविचार कि जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो त छैन।
कठिन लागि शुरुआती टमाटर बीउ को धेरै किसिमहरु बीच एक विकल्प हुन सक्छ। फन्दामा हुँदैन, यो सबै को पहिलो, भूमि षड्यन्त्र को आकार विचार, आवश्यक छ। के यो एक सानो छ भने, बौना विविधता ठूलो क्षेत्रमा लागि उपयुक्त रूपमा, taller प्रजातिहरू रुचाउँछु। तपाईं पनि किनभने तिनीहरूले थप सहयोग आवश्यक हेरविचार संग अग्लो प्रजातिहरू को stunted भन्दा बढी समय-खपत आवश्यक जान्नु आवश्यक छ।
सीधा खुला जमीन मा उत्पादन टमाटर रोपण, तर वसन्त माटो छैन कम 10-15 भन्दा डिग्री को एक तापमान गर्न warms गर्दा। अधिकांश मानिसहरू विभिन्न कन्टेनर मा बीउ रोपे र अंकुरण सम्म न्यानो कोठामा राखिएको। प्रारम्भिक चरण मा टमाटर हेरचाह समसामयिक हजारी र बिरुवा को उछाल छ। स्वभावका धावक सडक तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएर र दैनिक वसन्त सूर्य अन्तर्गत निवास समय वृद्धि बिस्तारै गर्न आवश्यक। यस्तो प्रक्रिया खुला जमीन बिरुवाहरु मा बिरुवा र रोपण acclimate मदत गर्नेछ लागि धेरै उपयोगी छन्।
को बिरुवा रोपण किरा को नकारात्मक प्रभाव तिनीहरूलाई रक्षा गर्नेछ विशेष वाहन यसको जरा भिजेको गर्न अघि। तपाईं यसलाई के गर्न बिर्सनुभयो भने, निराश, तपाईं अन्यथा आफ्नो सबै काम कोलोराडो कीरा र अन्य किरा नष्ट हुनेछ स्प्राउट्स छिडकना गर्न सक्छन् र पछि, तर यो प्रक्रिया हुनेछ निश्चित गर्न आवश्यक पूरा गर्न। खैर, टमाटर हेरविचार विभिन्न कीराहरू र किरा संग लगातार संघर्ष समावेश छ। दुर्भाग्यवश, यो तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ केही बिना, तर जब राम्ररी प्रयोग, विशेष कोष संक्रमण को मौका वा टमाटर को पूर्ण विनाश कम गर्न सक्छ।
लगाए बिरुवा, मौसम सुखा छ भने, दैनिक पानी हाले गर्नुपर्छ, तर यो पानी बस स्टेम अन्तर्गत गिर, र कुनै पनि मामला मा पात हालिएको छैन भनेर गर्नुपर्छ। को superfluous मार र पात stems आफ्नो निवास जस्तो बारम्बार वर्षा द्वारा विशेषता छ भने टमाटर को राम्रो बाली अलग गर्न आवश्यक हुनेछ लागि। यो प्रक्रिया rotting देखि stems रोक्न हुनेछ, बोट चाँडै प्रसारित गर्न सक्षम यसरी हुनेछ। यसबाहेक, पक्ष हटाउन (laterals) stems फल बडा बढ्न अनुमति दिन्छ। तपाईं माथि को सबै देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, त्यहाँ बिल्कुल केही जटिल छ, त्यसैले सबैलाई आफ्नो गर्मी घरेलु मा स्वादिष्ट र स्वस्थ टमाटर खेती मा संलग्न हुन सक्नुहुन्छ!
हरितगृह polycarbonate - व्यावहारिक र टिकाउ सामाग्री को समीक्षा
कसरी र currants कटौती कहिले
ककडी कसरी खाद, एक धनी बाली प्रदान गर्न?
छाला को संरचना र कार्य
तपाईं सबै भन्दा राम्रो समुद्र तट लागि देख रहे हो? पटाया तिनीहरूलाई बारेमा धेरै थाह!
मास्को मा Roerich संग्रहालय, सञ्चालनको घण्टा, फोटो, कसरी प्राप्त गर्न
जिन्जरब्रेड इस्टर: विशेष गरी पकाउने, उत्कृष्ट व्यञ्जनहरु र समीक्षा